ipod@ springwater - I-Airbnb
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguDan
IPod eseSpringwater yindlu ekhethekileyo, eyenziwe ngezandla ephakathi kwemithi. Inamagumbi amabini okulala: ibhedi elala abantu ababini, ifestile enkulu nendawo yokubuka imithi kunye negumbi elincinci elinamagumbi amabini, kunye neebhedi ezikhweleneyo. Igumbi lokuhlala line-smart tv ekwisixhobo sokujinga. Kukho negumbi lokuhlambela elineshawa emnandi.
Umgangatho osezantsi ufikeleleka kwindawo yangaphandle phantsi ukuya ekhitshini. Iminyango ephindwe kabini ivulekile emva kwendlu, enendawo yokubasa umlilo ephandle, ioveni yepitsa kunye ne-bbq.
Kunye nendawo yokuhlala, iindwendwe ziyakwazi ukuya ebaleni phambi kwe-The Pod, kunye neWillow grove kunye neendlela zokuhamba ezirawundi. Phakathi kweWillow, kukho ne-firepit, i-den kunye nokujinga ngentambo.
IPod eseSpringwater yindawo entle yokuqhelana nendalo kwaye ikumgama olula wokuya kwiindawo ezininzi zaseDevon, eSomerset naseDorset.
Uza kuba neebhokhwe ezintathu njengabamelwane!
4.98 · Izimvo eziyi-240
Ummandla weBlackdown Hills AONB usuka kwiindledlana ezinyukayo, ezenziwe ngamaplanga kumantla, ngaphaya komhlaba ophakamileyo ukuya kwifama ehambayo kumzantsi.
Iindawo kuyo yonke i-Blackdown Hills, ukusuka kwiinduli ze-ayini ukuya kwibala lesibini lemfazwe yehlabathi, zibonisa imbali etyebileyo yale ndawo. Iindawo ezahlukahlukeneyo zinika amathuba amahle okubuka indalo nezilwanyana zasendle, ngoxa iilali ezinomtsalane zenza iindwendwe zizive zamkelekile.
I-Blackdown Hills Area of Outstanding Natural Beauty ngokuqinisekileyo ihlala kwigama layo – yindawo entle kakhulu onokuyityelela.